DAAWO MUUQAAL-XOG Xiisad Culus Faransiiska Iyo Turkiga,Faransiiska oo Safiirkeeda Kala Baxay Turkiga - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO MUUQAAL-XOG Xiisad Culus Faransiiska Iyo Turkiga,Faransiiska oo Safiirkeeda Kala Baxay Turkiga
October 25, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Wararka Maanta 0
Faransiiska ayaa Sabtidii sheegay inay dib ugu yeerayaan ergaygoodii Turkiga u joogay kadib hadallo ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo soo jeedinaya dhiggiisa Faransiiska Emmanuel Macron inuu u baahan yahay baaritaanka caafimaadka maskaxda,Isagoo Paris ku cambaareyey inay tahay wax aan la aqbali karin.
Laakiin Ankara waxaa hada si gaar ah uga careysiisay olole uu u ololeeyay Macron ee ka dhanka ah Islaamka , Khilaaf cusub oo ku saabsan dilkii bishan macallin u muujiyay fasalkiisa kartoon nabi Maxamed ah.NNK
“Maxaan ka dhihi karnaa madax dowladeed oo sidan ula dhaqma malaayiin xubnood oo ka kala socda kooxo diimeedyo kala duwan: marka hore, baaritaan maskaxeed Ayuu U Bahan yahay Macron,” ayuu Erdogan ku yiri khudbad telefishanka laga sii daayay .
“Waa maxay dhibaatada shakhsiga uu Ku hayo Macron islaamka iyo muslimiinta?” Ayuu weydiiyay Erdogan.
“Macron wuxuu ubaahan yahay daaweyn maskaxeed,” ayuu sii raaciyey Erdogan, halka uu tilmaamayo inuusan filayn in hogaamiyaha Faransiiska uu ku guuleysan doono waajibaadka cusub ee doorashada 2022.
Hadalka Erdogan Ayaa Kaciyey Khilaafka Labada dal oo Xoogana Wakhtiyadan Danbe , sarkaal ka tirsan madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegay in safiirka Faransiiska ee Turkiga looga yeeray magaalada Ankara si uu wadatashi ula yeesho uuna la kulmi doono Macron si uu ugala hadlo xaaladda ka dhalatay cadhadii Erdogan.
“Hadalka Madaxweyne Erdogan ma ahan wax la aqbali karo. Waa Xad dhaafka iyo edeb darada Turkiga . Waxaan ka dalbaneynaa Erdogan in uu badalo hanaanka siyaasadiisa maxaa yeelay waa mid qatar ku ah dhinac walba,” ayuu sarkaalkan u sheegay wakaalada wararka ee AFP.
Sarkaalka Faransiiska, oo codsaday inaan la magacaabin, ayaa sidoo kale sheegay in France ay xustay “maqnaanshaha farriimaha tacsida ee Turkiga iyo taageerada” ee ka timid madaxweynaha Turkiga kadib markii madaxa looga jaray macalin Samuel Paty meel ka baxsan Paris.
Sarkaalka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay baaqyada ka soo yeeray Ankara ee ah in la qaadaco alaabada Faransiiska.
Macron bishaan wuxuu diinta islaamka ku tilmaamay inay tahay diin “dhibaato kujirta” aduunka oo dhan wuxuuna sheegay in dowlada ay soo bandhigi doonto biil bisha Diseembar si loo xoojiyo sharci 1905 oo si rasmi ah u kala saaray Muslimka Iyo Kuwa kale.
Wuxuu ku dhawaaqay kormeer adag oo dhanka iskuulada ah iyo in si wanaagsan loo xakameeyo maalgalinta shisheeyaha ee masaajida.
Laakiin dooda ku saabsan doorka islaamka ee faransiiska ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii madaxa laga jaray Paty, taas oo dacwad oogayaashu ay ku sheegeen in uu fuliyay wiil 18 jir ah oo u dhashay Chechen oo xiriir la lahaa Islaamin ku sugan Syria
Turkiga waa dal aqlabiyad muslim ah oo qeyb ka ah NATO laakiin aan aheyn EU, halkaasoo dalabkeeda xubinimo uu hakad ku jiray tobanaan sano khilaafaadyo badan.
Madaxweynaha Turkiga ayaa yiri “waxaad si joogto ah u Fogaynaysaan Turkiga . Tani waxba idin soo kordhin mayso
“Waxaa jiri doona doorashooyin (faransiiska) … waanu arki doonaa masiirkaaga (Macron). Uma maleynayo inuu wado Wanagsan u hayo Dadka Faransiiska . Sabab? Waxba Kama Qaban France waana inuu isagu Daaweeyaa naftiisa. “Erdogan
‘Musiibooyinka ka dambeeya’
Khilaafka kale ee cusub ee u dhexeeya labada hogaamiye wuxuu salka ku hayaa Nagorno-Karabakh – oo ah gobol u badan qowmiyada Armenia oo ka go’da gudaha Azerbaijan, taasoo ku dhawaaqday madaxbanaanida markii Midowga Soofiyeet dhacday, taasoo dhalisay dagaalo isdaba Jooga Ilaa Maanta.
Turkiga ayaa si xoog leh u taageeraya Azerbaijan ee iskahorimaadka laakiin waxa uu beeniyay eedeymaha Macron ee ah in Ankara ay u dirtay boqolaal ka tirsan dagaalyahannada Suuriya si ay u caawiyaan Azerbaijan.
Erdogan ayaa Sabtidii ku eedeeyay Faransiiska – oo ay weheliyaan Ruushka iyo Mareykanka ee Hogaamiya Koocda , Minsk ee loo xilsaaray xallinta khilaafaadka – “inay ka dambeeyeen masiibooyinka iyo Dhibaato ka Dhan Ah Azerbaijan”.
Waxa kale oo uu ku celceliyay sheegashooyin hore oo ahaa in Faransiiska, oo ay ku badan yihiin bulshada Armenia, uu hubeynayo Yerevan. “Waxaad u maleyneysaa inaad nabada kusoo celin doonto hubka aad u direyso Armenia. Ma awoodid maxaa yeelay daacad ma tihid.”
Laakiin sarkaalkan ka tirsan Faransiiska wuxuu sheegay in Erdogan haysto laba bilood oo uu kaga jawaabo dalabaadka ku saabsan isbedelka mowqifka iyo in ay soo afjarayso “hal-abuuryadiisii ​​halista badnaa” ee bariga Mediterranean iyo “anshax-darrada aan mas’uuliyadda ahayn” ee ku saabsan Karabakh
Sarkaalka ayaa yiri “Tallaabooyinka waxaa loo baahan yahay in la qaado dhamaadka sanadka.”
Booliiska Jarmalka oo xoog ku galay masaajid ku yaal caasimada Berlin, Erdogan wuxuu carrabka ku adkeeyay in dhacdadani ay caddeyn u tahay u gudbidda Islaam Nacaybka waddamada Yurub marxalad cusub.
Wuxuu carabka ku adkeeyay in kororka islaam naceybka ee yurub uu gaaray heer cabsi leh, wuxuuna sheegay in kaqeybgalka boqolaalka boliiska ee duulaanka lagu qaaday masjid ay tahay arin ka fog ixtiraam, loomana sharixi karo sababo amni, ama wax kale.
Macron iyo Erdogan waxay ku muransan yihiin xuquuqda badaha bariga Mediterranean, Libya, Syria iyo – ugudambeeyay – khilaafka sii kordhaya ee Azerbaijan ee gooni u goosadka Armenia ee Nagorno-Karabakh.
Turkiga ayaa taageeray Azerbaijan ololahoodii ugu dambeeyay ee Nagorno-Karabakh halkaasoo boqolaal qof ay ku dhinteen tan iyo markii ay dagaalladu socdeen dabayaaqadii Sebtember.
“Waxaan la hadlay (madaxweynaha Azerbaijan Ilham) Aliyev subaxnimadii maanta,” ayuu yiri Erdogan.
“Hadda, walaalaheen Azerbaijan waxay ku wajahan yihiin dhulalka la haysto. Waxay bilaabeen inay soo ceshadaan. ”
Erdogan Ayaa Qabtay Macroon halka Ugu Xun Uguna jilicsan yahay ,Waana Inuu Aduunka Islaamka Ugu Baaqay In la joojiyo Ganacsi Kasta oo faransiiska,Iyo Falcelinta islaamka oo Siweyn Uga Horyimi Bartilmaameedka Islaamka,Midani oo Erdogan Ku Helayo Tixgalin Weyn ee Difaaca islaamka.
Gabadh Jeclaatay Nin Kiristaan Ah oo Qoyskoda Timaha Ka Xiireen Gurina Ku Xidheen
DAAWO VIDEO:Culimada Hargeysa oo Afka Furtay Nin Ajinabi oo Anshax Xumo Ku Samayn Jirey Gabdhaha Soomaliland.